जाडोमा यस्ता खानेकुराले बनाउँछ चुस्त दुरुस्त ! - Bishwo Sandesh - Bishwo Sandesh
जाडोमा यस्ता खानेकुराले बनाउँछ चुस्त दुरुस्त !
३ पुष २०७७, शुक्रबार १५:४२
काठमाडौँ । धेरैजसो मानिसहरुलाई दिनभरी कुनै न कुनै बेला थकान महसुस हुन्छ । शरीरमा ऊर्जाको कमीका कारण यसको असर दैनिक कामकाजमा समेत पर्छ । तपाईं के र कति मात्रामा खानुहुन्छ यसको असर पनि पूरा दिनको क्रियाकलापमा पर्छ । खानपिनका केही कुराले पोषक तत्वका साथै शरीरलाई तुरुन्त ऊर्जा दिने काम पनि गर्छ । आउनुहोस्, आज त्यस्ता खानेकुराबारे कुरा गरौं जुन खाँदा तपाईं दिनभरी सक्रिय रहनुहुनेछ ।
प्रकाशित | ३ पुष २०७७, शुक्रबार १५:४२
जाडोमा कुन–कुन रोगको जोखिम ?
नायीका मनिषा अब ‘मस्का’मा देखिदै
बेलायतको अल्डरसटको काउन्सिलरमा नेपाली समुदायका प्रवेश केसी विजयी
मोरङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई कोरोना पुष्टि, तीन दिन अदालत बन्द